Seraseran’ny CENI : Niantso vonjy tamin’ ny sefo fokontany -
AccueilSongandinaSeraseran’ny CENI : Niantso vonjy tamin’ ny sefo fokontany
Seraseran’ny CENI : Niantso vonjy tamin’ ny sefo fokontany
Tena hanafaingana ny asa amin’ny fahatratrarana ny isan’ny mpifidy ho 10 tapitrisa ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana alohan’ny daty voafaritra fa ahataperan’ny fanisana sy fisoratana anarana izay afaka 20 andro. Vokany omaly izy ireo no niantso ny lehiben’ny fokontany mba hanamafisana ny fanentanana atao amin’ ireo vahoaka, izay mbola tsy ao anatin’ ny lisitra. Raha ny antontan’isa mantsy dia 4,8 % ihany no vita ankehitriny, ary tombanan’ny CENI 9% izany aorian’izao dingana hiarahana amin’ ireo sefo fokontany miisa 192 ireo. Raha ny nambaran’ny filohan’ny CENI dia “ ny fanavaozana ny lisi-pifidianana dia dingana iray ahafahana miantoka ny fangaraharahan’ ny fifidianana. Niantso ny sefo fokontany izahay satria izy ireo no tompon’andraikitra eny ifotony, amin’ ny lafin’ny fanavaozana io lisi-pifidianana io” hoy hatrany i Hery Rakotomanana nandritra ny fihaonana. Raha ny nambaran’ireo lehiben’ny fokontany kosa dia mbola fanamby ho tratrarina io mpifidy 10 tapitrisa napetraky ny CENI io, satria dia zara raha misy folo aza ireo olona tonga mijery ny anarany eny amin’ ny fokontany.
Sarotra ny mandainga fa tsy ampy ny serasera izay tontosain’ny CENI manolona ny fanentanana ny mpifidy, zara raha misy eny amin’ ny haino aman-jery. Manginy fotsiny ny tsy fanatanterahan’ ireo tompon’andraikitry ny serasera fanentanana amin’ ny gazety sy ny fitsinjarana izany amin’ny tokony ho izy, zara raha mianoka fotsiny amin’ny tambazotran-tserasera fotsiny ihany izy ireo fa tsy mitady lavitra, mba manantona ny vahoaka na iray isaka ny fokotany aza dia azo atao. Tsy azo inoana mantsy raha hoe ny ho enti-manana no tsy misy , satria dia efa hiaraha-mahalala ireny vola fanampiana amin’ny fanomanana azo avy amin’ireo mpiara-miombon-antoka amin’ ny CENI. Raha raisina ohatra izao ilay fanombohana ny fanisana tany Mahajanga dia mpanao gazety vitsy ihany no nentin’ izy ireo , ary anisan’ny tsy nantsoina tamin’izany ny gazety Triatra asa hoe inona no antony. Hatreto ihany koa dia tsy tena fantatra mazava hoe iza no mitarika ny seraseran’ ny CENI satria tsy dia hita ny vokany, ary tsy mipaka eny amin’ ny vahoaka ny hafatra. Noho izany, tokony hisy ny fanovana na ihany koa fanavaozana izay tokony hotanterahin’ ny filohan’ ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana, mba hahatomombana ny fampahafantarana ny tokony hataon’ ny vahoaka manan-jo.
Hifoteran’ireo sendika nataony fitaovana teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai ireo depiote miisa 73. “Ireo depiote milaza fa ho an’ny fanovana ireo no niantso anay sendika nidina teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai, ary nanome toky fa ...Tohiny
Princesse Royale Anne Elisabeth Alice Louise : Nitsidika ny « cimetière de guerre britannique » tao Antsiranana
Antenimieran-doholona : Lany ny lalàm-pifidianana